Showing ११-२० of ३९४ items.
नयाँ-नयाँ प्रेममा छन् बलिउड अभिनेता रणवीर कपुर र अभिनेत्री आलिया भट्ट । त्यसैले उनीहरु बढिभन्दा बढि समय एक-अर्कासँग गुजार्न चाहन्छन् । यसका लागि सँगै फिल्म खेल्नेभन्दा राम्रो अर्को उपाय के हुन सक्थ्यो ? [caption id="attachment_88035" align="aligncenter" width="760"] फायलफाेटाे[/caption] अहिले आलियाको हात खाली छैन । उनको प्रमुख भूमिका रहेको फिल्म ‘राजी’ सुपरहिट भएपछि निर्माता-निर्देशकहरु नारीप्रधान फिल्मका स्कृप्ट लिएर उनीकहाँ धाइरहेका छन् । तर, आलिया ती फिल्म साइन गरिरहेकी छैनन् । उनको पहिलो शर्त हुन्छ, फिल्ममा हिरो रणवीर कपुर हुनुपर्ने । रणवीरको पनि त्यही हाल छ । यसअघि उनी आफूले खेलेका
प्रकाशित मितिः श्रावण ३, २०७५
'ठग्‍स अफ हिन्दोस्‍तान’ को सुटिङमै २ सय करोड
एजेन्सी/यशराज ब्यानरको ‘ठग्‍स अफ हिन्दोस्‍तान’ को सुटिङमा करीब २ सय करोड खर्च भएको छ । सुत्रका अनुसार, फिल्मका लागि १८ औँ शताब्दीको भारतको सेट पनि तयार पारिएको थियो । फिल्मसँग जोडिएका अलग-अलग टीमका व्यक्तिले यसको पुष्टि गरेका छन् । सबैभन्दा बढी खर्च एक्सन सिनमा भएको छ । फिल्मको इटलीको माल्‍टा, थाइल्याण्डको बैंकक, भारतको जोधपुर र गोवाको मल्टिपल लोकेशनमा सुटिङ गरिएको छ, जसमा महंगो बजेट खर्च भएको छ । देश र विदेश गरि कुल ४५ स्टन्ट परफर्मर, बडि डबल, फाइट कोरियोग्राफर र एक्सन डाइरेक्टर हायर गरिएको छ । तर, निर्देशक विजय कृष्‍ण आचार्यले यस फिल्ममा मोटो रकम खर्च गर्नका लागि आदित्य चोपडासँग अनुमती
एजेन्सी/सुपरस्टार सञ्जय दत्तको बायोपिक फिल्म 'सञ्जू' २९ जूनबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । फिल्ममा एक्टर रणबीर कपूरले सञ्जय दत्तको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनले सञ्जयको जवानीदेखि वर्तमान समयसम्मको रोल्सका लागि निकै मिहिनेत गरेका छन् । फिल्ममा सञ्जय दत्तको पिता सुनील दत्तको भूमिका निर्वाह गरेका अभिनेता परेश रावलले रणबीरको कामलाई एक्टिङ स्कूलहरुमा देखाउनु पर्ने बताएका छन् । उनी भन्छन्, 'रणबीरले रोललाई हदभन्दा राम्रोसँग न्याय दिएका छन् । उनले पाथ-ब्रेकिङ परफर्मेन्स दिएका छन् । रणबीरको यो परफर्मेन्सलाई एक्टिङ स्कूलहरुमा देखाउनु पर्छ ।' 'रणबीरले यो मुश्किल भूमिकालाई अद्भुत तरिकाले निभाएका छन्',
एजेन्सी । कालो हरिणको मुद्दामा ५ वर्ष जेल तोकिएपछि केही दिनमै धरौटीमा छुटेका सलमान खान अभिनित ‘रेस–३’ बक्स अफिसमा खराब कमाइ गर्ने फिल्म बनेको छ । सन् २००८ मा बनेको रेसले बलिउड नगरीमा राम्रो कमाइ गरेको थियो । सैफअली खान अभिनिति ‘रेस’ कै सिक्वेलको रुपमा ‘रेस–३’ आएको हो । जसमा ‘दबङ ब्वाइ’ सलमान खानको केही चलेन । रिलिजको नवौँ दिन आइपुग्दा पनि फिल्मले औसत दैनिक साढे ५ करोड मात्रै सङ्कलन गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । हालसम्म यो फिल्मले एकसय ५३ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन गरेको छ । रेमो डिसुजाको निर्देशनमा बनेको ‘रेस–३’ ले दर्शकलाई कुनै प्रभाव पार्न सकेन । त्यो भन्दा पनि बढ
प्रकाशित मितिः असार ११, २०७५
प्रियंका चोपडा ब्रिटेनका राजकुमार ह्यारी र अमेरिकी नायिका मर्केलको शानिबार आयोजित विवाह समारोहमा सहभागी भइन् । मर्केलकी साथी भएको नाताले उनी उक्त शाही विवाहमा उपस्थित भएकी हुन् । उनी दिउँसो आयोजना भएको विवाहमा avender Vivienne Westwood स्कर्टमा देखिएकी थिइन् जसमा उनलाई fascinator (ह्याट) लगाएकी थिइन् । विवाहको निम्तो कार्डमा ड्रेस कोड निर्धारण गरिएको थियो जस अनुसार महिला स्कर्टमा उपस्थित हुनपर्नेछ । यस्तै महिलालाइ ाबकअष्लबतयच वा ह्याट लगाउने सल्लाह पनि दिइएको थियो । यद्यपी, यसका ह्याट लगाउनका लागि शर्त भने लागू गरिएको थिएन । यस्तै, फ्रोगमोर हाउसमा बेलुका आयोजित रिसेप्सन पार्टीमा भने प्रियंक
काठमाडौं /बलिउडकी सुन्दर अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको उमेर ३५ वर्ष कटिसकेको छ। उमेर बढ्दै जाँदा प्रियंकाको परिवारले अब विवाह गरिदिएहुन्थ्यो भन्ने चाहना गरेका छन्। तर, उनले भने विवाह गर्न तयार भएको तर भनेजस्तो पुरुष नपाएको भन्दै कुरा पन्छाउँदै आएकी छन्। हालै एक प्रसंगमा प्रियंकाले आफूलाई चाहिएको श्रीमान् कस्तो हो भन्ने कुरा खुलाएको खबर आज प्रकाशित साप्ताहिकले छापेको छ। प्रियंका भन्छिन्, ‘त्यो पुरुष मलाई देखेर पागल होस्, अत्यन्तै माया गर्ने खालको होस् अनि मनको कुरा खुलेर भनोस्।’ प्रियंकालाई लाग्छ, अधिकतम पुरुषले मनका कुरा मनमै लुकाउँछन्। तर यस्ता पुरुष आफूलाई मन नपर्ने उनले बताएकी छन्।
बिहेकै दिन बलिउड अभिनेत्री सोनम कपुरले आफ्नो थर परिवर्तन गरिन् । उनले इस्टाग्राममा आफूलाई सोनम कपुर आहुजा बनाइन् । यसमा धेरैे महिलावादीहरुले कडा प्रतिक्रिया जनाए । हालै एक अन्तरर्वातामा सोनमले यो विषयमा मुख खोलेकी छिन् । उनले नाम वा थर फेर्नु आफ्नो मर्जिको कुरा भएको बताइन् । सोनमले पिता र पति आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण व्यक्ति भएको र उनीहरु दुवैको थर धारण गरेको बताइन् । साथै उनले यो पनि थपिन्, ‘मैले थर फेर्दा प्रश्न उठ्छ, आनन्दले फेर्दा किन उठेन ?’ खासमा आनन्दले पनि आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा आनन्द एस आहुजा लेख्न थालेका छन् । प्रष्ट छ एसको अर्थ हो सोनम । श्रीमतीको नाम आफ्नो नाममा घुसाएर उनले स
१,२८९ पटक पढिएको
काठमाडौं/ श्रीदेवीको ब्लकबस्टर फिल्म मिस्टर इन्डियाको सिक्वेलको प्रतीक्षामा रहेका प्रशंसकहरू निराश हुनुपर्ने भएको छ । उक्त फिल्ममा उनको एक विशेष भूमिका हुने बताइएको थियो । श्रीदेवीको देहावसानपछि कुनै अर्को हिरोइनलाई साइन गराइने सम्भावना व्यक्त गरिएको थियो । तर अब फिल्म नै नबन्ने कुरा उठेको छ । बलिउड हंगामा डट्कमको एक रिपोर्टअनुसार, मिस्टर इन्डिया फिल्मका निर्देशक शेखर कपूरले भने, ‘सिक्वेलका विषयमा बोनी कपूरको के धारणा छ मलाई थाहा भएन तर म कहिले पनि यो फिल्म निर्देशन गर्नेछैन । श्रीदेवी नभएको मिस्टर इन्डियाको सिक्वेल बनाउने प्रश्नै उठ्दैन ।’ सूत्रहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुुसार, मिस्टर इन्डियाक
काठमाडौं/ मानिसले आलियालाई यी खबरहरूका बारेमा प्रश्न गर्दा उनी लाजले रातोपीरो हुन्छिन् ।बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टको लिंकअप रणवीर कपूरसँग भएको खबर आजकल खुब चलिरहेको छ । एक टीभी च्यानलसँगको अन्तर्वार्ताका बेलामा आलिया यो प्रश्न सुनेर बहुतै लजाइन् र आफ्नो अनुहार दुवै हातले ढाकिन् । उनले आफ्नो अफेयरका बारेमा केही पनि नलुकाउने अनि केही पनि नबताउने भनिन् । आलिया भन्छिन्, ‘अफेयरका खबरहरू साँचो भएपनि मलाई नराम्रो लाग्दैन, झुटो भएपनि नराम्रो लाग्दैन । यस्ता खबरले मलाई असर पार्दैन । म कूल बस्नुपर्छ । अफेयरको कुरा म कहिले पनि सीधै स्वीकार गर्दिनँ र अस्वीकार पनि गर्दिनँ ।’ आजकल रणवीरसँगको अफेयरको खुबै
इन्डियन एक्सप्रेसको रिपोर्टका अनुसार हिमेश तथा सोनियाको विवाह शुक्रबार राति हुनेछ । सोनम कपुर र नेहा धूपियापछि अब बलिउडमा एक अर्को विवाहको चर्चा चलेको छ । प्रख्यात गायक हिमेश रेशमियाले आफ्नी गर्लफ्रेण्ड सोनिया कुपरसँग विवाह गरेको अपुष्ट समाचारहरु सार्वजनिक भएको भारतीय अनलाइनहरुले समाचार लेखेका छन् । केही सञ्चारमाध्यमहरुले भने हिमेश र सोनियाको मेहन्दी कार्यक्रम दुई दिन पहिला भइसकेको छ र आज शुक्रवार पार्टी हुनसक्छ । हिमेशको यो दोस्रो विवाह हुनेछ । यसअघि उनले सन् १९९५ मा कोमलसँग विवाह गरेका थिए तर २०१७ मा दुबै जना अलग भएका थिए । हिमेशले २१ वर्षको उमेरमा कोमलसँग विवाह गरेका थिए र उनीहरुको एक छोर
प्रकाशित मितिः बैशाख २८, २०७५
१,१३४ पटक पढिएको